नाश्ता दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भोजन हो, - InHeadline
नाश्ता दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भोजन हो,
By Anu Rana on Apr 17,2018 - 12:44
भारी आहारबाट वजन घटानेको लागि आहारको मुख्य प्लस र भिन्नता भनेको स्वतन्त्र रूपमा तपाईंको मेनु बनाउने क्षमता हो, उनीहरूको प्राथमिकताहरू र स्वाद अनुसार उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस्। यसबाहेक, तपाईं भूख पङ्गहरू जुन केही आहारहरूमा निहित छन् त्रास हुनेछ। एक मेनु बनाउँदा याद गर्ने मुख्य कुरा यो हो कि कैलोरीको खपत रकम खरिद रकम भन्दा कम हुनुपर्छ। केवल यस अवस्थामा तपाईं वजन गुमाउन सक्नुहुन्छ वा सेल्युलाइटबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
हामी सधैँ भन्ने गर्छौ कि नाश्ता दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भोजन हो, तर हामी गलत हुन सक्छौं ? ड्रा एन्डरेव रेनौअत हामी सबैसँग एकसाथ नाश्ता खाने रोक्न सोच्छौं।
नाश्ता, जहाँ सम्म मलाई चिंतित छ, दिनको महत्त्वपूर्ण भोजन हो र मलाई लाग्छ कि समस्याको कारणले गर्दा हामी समयमा नै नाश्ता खान सक्दैनौ यो ठुलो समस्या हो, 'उहाँले सूर्योदयलाई भन्नुभयो।
डा रेनटाउले बताए कि हाम्रो आहारमा तीनवटा मुख्य कारकहरू छन् जुन हामी कस्तो खाना खान्छौ, हामी कती खान खानछौ र जब हामीले के खान्छौं। हामी विचार गर्न आवश्यक छ । यो कारणले गर्दा हामी निरन्तर खाना खानाले हाम्रो शरीरले ब्रेक गर्न मौका पाउँदैन।
'हामी इन्सुलिन को मात्रा लाई सम्बोधन गर्न को लागी हामी शरीर को उत्पादन गर्न को कारण हो किनकि यसको प्रतिरोध इन्सुलिन को अनुवाद छ, र मोटापे संग अंतराल समस्या हो,' उनले भन्यो। हाम्रो देशमा मोटोपन को रेकर्ड उच्च मा छ हो यस्लाई रोक्न र कुनै रोग लागन नदिन हामीले खाना मा बिचार पुराउनु पर्दछ ।
नाश्ता गर्न मात्र एक कदम छैन, जस्तै त्यहाँ पनि एक छ घण्टा घण्टा सञ्झ्याल छ जुन तपाइँले प्रत्येक दिन खाना खाने अनुमति दिइन्छ, जुन १ देखि ७ बजे सम्म हुन्छ। एक थप बोनस भनेको तपाइँले त्यस समय फ्रेम भित्र क्यालोरीहरू गणना गर्न आवश्यक छैन। 'तपाईलाई केहि अपवाद गर्न आवश्यक छैन, एक अपवादको साथ, र यो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट हो,' डा रेनल्टले बताए। 'त्यसो भए सबै चीजहरू, ताजा मासु, ताजा सब्जियां, ताजा माछा, नट, एकोकोडस र डेयरी बिल्कुल ठीक छ। 'तपाईं सबै सुन्दर खाना खाई सक्नुहुनेछ र तपाईलाई रकम सीमित गर्न आवश्यक छैन।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ सीमित क्यालोरी छैन। ' चिन्तित भएकाहरूका लागि तिनीहरू खाना बिना आफ्नो दिनको बारेमा जान्न सक्नेछन्, डा रेनल्टले तपाईंको शरीरलाई समायोजन गर्नेछन्। 'तपाईं १८ घण्टामा के गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाई खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई इन्सुलिन लाई शून्यमा फिर्ता आउन अनुमति दिइन्छ,' उनले बताए।
यद्यपि तपाईं छ घण्टा घण्टा सञ्झ्यालमा जुनसुकै चाहानुहुन्छ खानुहुन्छ, डा रेनल्टले यो कारण भित्र रहनु भएको छ, बेशक यसले यसको अर्थ छैन कि तपाईं जान सक्नुहुन्छ र ६ बर्गर खानुहोस्।
तपाईंले हेर्न आवश्यक एक मात्र चीज परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट हो, 'उनले वर्णन गरे। 'यो चिनी र केहि चीज जसले चिनी समावेश गर्दछ जुन प्रसोधन गरिन्छ जुन र प्याकेट बाहिर कुनै पनि चीजले चिनी थपेको छ।' उनले तपाईंको फ्रिज हेर्ने र मोटो-मुक्त लेबलको साथ केहि बाहिर चल्ने सुझावको रूपमा उनीहरूले बोसो बाहिर राखेर यसको स्थानमा चीनी राखे। 'मोटाले तिमीलाई मोटो बनाउँदैन, चिनीले तिमीलाई चिसो बनाउँछ'।
'म दुईवटा प्रतिज्ञाहरू छन् - पहिलो छ कि यो काम गर्नेछ र दोस्रो, यो काम गर्ने एकमात्र चीज हो।'
ट्याग - धेरै महत्त्वपूर्ण छ , नाश्ता दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भोजन हो ,
उच्च रक्तचाप भएकाले खानै पर्ने पाँच खाना
गलत खानपान, व्यस्त दिनचर्या, कामको दबाब र तनावको असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्छ। जसले गर्दा कतिपयलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखापर्छ। उच्च रक्तचापको समस्या भएकाका लागि फाइदाजनक खानेकुराः
होलीमा रङ खेल्दै हुनुहुन्छ ? स्किनलाई यसरी जोगाउनुहोस्
पेटमा सेता धर्सा भएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
गाईको घ्यूको यस्ता छन् फाइदा
by Anu Rana | Mar 08
युरिक एसिडः कसलाई, किन र कसरी हुन्छ
by Anu Rana | Mar 06